MAXEY SOO KORDHIN KARTAA SHIRKADA DIYARADA EE SUHURA AIRWAYS? | Toggaherer's Blog
« KULMIYE WAXA UU TAAGAN YAHAY NIN QOYANI BIYO ISKAMA DHAWRO
QODOBADII DALKU WAXAY NOQDEEN QORI LAYSKU DIFAACO: BY ABWAAN AXMED FARTAAG »
MAXEY SOO KORDHIN KARTAA SHIRKADA DIYARADA EE SUHURA AIRWAYS?
Waxaan ku bilaabaya magaca Alle, nabad gelyo iyo naxariisii Nabigeenii suubana(CSW) korkiisa ha ahaato.
Waxa sida ay dad badani la maqleen maalmahan warkeedu suuqyada ku jirey in ay soo shaacbaxdey, Shirkad diyaaradeed cusub oo magaceeda la yidhaa Suhura Airways. Shirkadan oo hadal haynteedu ay xawlu ku socoto ayaa waxaa mudan in la is weydiiyo, hadiiba ay shirkadani noqoto mid cag adag isku taagta, maxey ku soo kordhin kartaa bulshaweyna Somaliyeed ee ku filiqsan dunida dacaladeeda.
Inta Aynaan su`aasha ka jawaabin aynu marka hore is weydiino, su`aal kale oo ah. Ma jirtaa horta marka hore baahi ay bulshada Somaliyeed ee dibadaha ku nooli u qabaan iney helaan Shirkad Diyaaradeed cusub oo soo koradha si ay baahiyahooda u daboosho?. Jawaabta su`aasha oo aan filayo in cid kastaaba ay sida dayax shan iyo tobana u garan karto, ayaa waxey jawaabtu tahey. Haa wey jirtaa hamuun badan oo ay dadka Somalida ee qurbaha ku nooli, u qabaan iney helaan cid daboosha dhibtaada ka hasyta iney si hawl yar dalkii ku gaadhaan.
Mar hadii aaney jirin Dawlad ka jirta dhulkii Somaliweyn oo awood u leh iney dabaasho baahida ay u qabaan dadka Somaliyeed diyaarado ay dhulkii ku gaadhaan, waxaa hubaala in bulshada Somaliyeed ee ku dhaqan dibaduhu ay si weyn u soo dhaweynayaan muwaadin kasta oo isku taxalujiya inuu buuxiyo booska ay baneysay dawlad shaqeysa oo misaankeeda lihi. Dabcan hadii Dayaxa la waayo xidigaha ayaa lagu gudaa
Hadaba marka aynu isla gareyn iney jirto baahi baaxad weyn leh, oo dadka Somalidu u qabaan iney helaan Diyaarado daboola dulumaadayada ay dhulkii ku tagi lahaayeen ayaa waxa aynu ka jawaabeyna su`aasha ah, maxey soo kordhin kartaa shirkada cusub ee Suhura Airways?. Su`aashan jawaabteedi qofka aan si qoto dheer u fahman halka ay asal ahaan ka soo jeedo Diyaaradani wuxuu ku dhex hafanaya inuu fahmo waxa dhabta ee Shiradani ay kaga duwanaan karto, shirkadihii hore ee jirey ee dadka Somalida ahi ay gacanta ku hayeen.
Waxaa hadaba jira laba qodob oo marka qofka loo iftiimiyo uu dareemi karo in la helay fursad dahabiya, ama shirkad la odhan karo waxey buuxin kartaa boos weyn oo banaana!!!. Labada qodob ayaa waxey kala yihiin.
1.Dadka shirkadani iska lihi waa dad sumcad weyn ku leh dalka Somalia, Somaliland, iyo wadanka Ethiopia oo ah wadan ay dagaan milaayiin dada oo Somali ah dhanka kalena ah wadan guuna oo la darisa Somalia. Dabcan waxaa sahlanaan doonta in Shirkadani ay si hawl yar u heli karto furayaasha Shirkada Diyaaradaha Ethiopian Arilines oo ah shirkada ugu horeysa ee uu leeyay wadan Afirca ku yaala marka laga hadlayo xaga wanaaga diyaaradaha iyo farabadanida duulimaadyada.
2.Qodobka labaad ayaa ah in Dadka shirkadani iska lihi ay yihiin dad maalqabeeno ah oo la odhan karo waxey awood u leeyiin iney dhameystiraan adeegyada ay shirkadoodu u baahan tahey.
Hadaba iyadoo dadka qurbaha jooga ay dareemayaan ama og yihiin dhibtaada laxaadka leh ee ka haysta iney ka haqab beelaan duulimaadyado wadankii geeya ayaa waxa hubaala in hadii masuuliyinta Shirada Suhura Airways ay sameeyaan dadaal adag oo dhan kastaba leh in si hawl yar ay u heli karaan macmiil badan oo ku soo qulqusha.
Aniga oo aan khibrad badan u laheyn macluumada iyo adeega diyaaradaha hadana waxaa igu maqaalo ah in Shiradan Suhura Airways ay hada rabto iney dhameys tirto adeegaya Localka ah ee dalka gudihiisii, iyagoo rakaabka ka qaadi doona magalaada Adis-Ababa markaasna geyn doonta dalka Somalia iyo Somaliland ama hadii si kale loo yidhaa Dhulka Somalida oo dhanba. Waxaan hadaba shirkada kula talin lahaa iney culeys saraan iney la hadlaan shirkada Ethiopian Arilines kuna booriyaan in shirkaadasi ay qiimo dhimis sameyso si markaa ay dib ugu hesho macmiisheedii ka yaacdey wixii ka danbeeyay markii ay joojisey dulmimaadyadii Addis-Hargeisa. Isku soo duube waxaanu shirkada Suhura Airways ku soo dhaweynanaa gacmo furan waxaanu ku adkeynayaa iney hawsha inta iyaga ku xidhan dhameystiraan.
Waxaan u rajeynayaa shirkadan Suhura Airways guul iyo hurmar dhaqso ah.
This entry was posted on March 19, 2009 at 5:52 am and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.